Manan-tantara Hotels In Eoropa sy ny fomba ahatongavana any | Save A Train
Home > Travel Europe > Manan-tantara Hotels In Eoropa sy ny fomba ahatongavana any
Business Travel ny Train, Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel UK, Travel Europe
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 29/12/2019)
Hotels in Eoropa manan-tantara dia tsy fahita firy fahitana, lehibe indrindra any amin'ny tanàna manan-karena tantara. Paris, London, Roma, Munich, Vienna - tanàna rehetra ireo dia manana toerana mahafinaritra mba hanolotra. mpizaha tany izay mitady mafy ny sasany nentim-paharazana lafo vidy dia tsy hanana olana nahita trano hipetrahana ao Eoropa. Ny tsara indrindra momba izany fa afaka nandeha tany amin'ireo tanàna ireo rehetra lamasinina, eo amin'ny teti-bola. Ireto an-tampony manan-tantara dimy Hotels in Eoropa sy ny fomba ahatongavana any lamasinina:
1. Manomboka ny lisitry ny tantara Hotels amin'ny – The Ritz, Paris
Tsy misy lisitry ny ambony hotely manan-tantara any Eoropa, raha tsy Paris. Ny vato soa iray saro orinasa vahiny misongadina: The Ritz. ny trano fandraisam-bahiny mirehareha manan-karena tantara ary ny mirentirenty anatiny mba handeha hiaraka aminy. Nisiany mponina tao 1898, ary na dia avy eo an-tampon dia ny fampiononana.
Ny Ritz dia mazava ho malaza safidy ho an'ny mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina Eoropa avo. Ny sasany ny vahiny malaza dia ny Duke sy Duchess ny Windsor, Coco Chanel, ary Ernest Hemingway, ankoatry ny zavatra hafa. Raha tianao ny hijery ny mahavariana tantara, dia afaka maka ny fiaran-dalamby ho any Paris avy amin'ny tanàna eoropeanina lehibe hafa toy ny London, Roma, Amsterdam, na Brussels.
Belmond Cadogan Hotel in London dia heverina ho Boutique Hotel, saingy manana lava sy mampientam-po tantara. Ny sasany dia milaza fa na dia mampivarahontsana indraindray, araka ny Oscar Wilde dia miandry ny fisamborana azy any amin'ny tany 1895. The Cadogan Manana 64 efi-trano, ary tena tsara Edwardian rivotra iainana. Tena manan-tantara townhouse, ary efa nitandrina ny maro ny toetra mampiavaka ny vanim-potoana. Raha maka ny tolo-kevitra voalohany, afaka mora foana mandeha avy any Paris ho any London lamasinina.
3. Albergo do hany Al Pantheon, Roma
Raha ny manan-tantara Hotels in Eoropa, Albergo do hany Al Pantheon any Roma mandray ny mofomamy. Izany no iray amin'ireo hotely tranainy indrindra eto amin'izao tontolo izao, naorina in 1467! Efi-trano izay hifantoka amin'ny Pantheon no tsara indrindra, tanteraka tamin'i Renaissance fomba fandriana sy 17 tamin'ny taonjato frescos toy ny ravaka. Tsy hahazo na tsara na ara-tantara mihoatra noho izany. Tombony iray hafa dia ny hoe nankany Roma dia tena mora lamasinina, indrindra fa manomboka amin'ny lehibe hafa Zavatra tanàna.
Ny Torbrau Nanomboka ho toy ny toerana ho an'ny reraka mpandeha avy any Salzburg hanana fitsaharana sy tsara labiera. Izany dia midika hoe efa niasa nandritra ny 500 taona, Ary nahazo ny fanavaozana ankehitriny ao amin'ny 'taona 90. Ny Torbrau dia amin'ny toerana tena amin'ny raharaham-barotra mpandeha ary ny mpizaha tany izay te kokoa mahafatifaty Hotel traikefa manan-tantara. Raha toa ianao mitsidika Munich lamasinina avy any Berlin, Vienna na tanàna eoropeanina hafa, afaka mikasa ny hijanona ao amin'ny Torbrau.
5. Ny Grand Hotel Wien, Vienna
Ny Grand Hotel Wien naorina tamin'ny 1870, ary nandany fohy ihany no fe-potoana ho toy ny toeram-ponenana manokana. Izany no tranainy indrindra amin'ny "Ring Hotels" manodidina ny faritra Opera 'ny Ringstrasse in Vienna. Raha ny tantara mandeha, ny trano fandraisam-bahiny dia nahita ny anjara sy ny ratram-po na fientanentanana. Izany no resahana ny Mayerling raharaha izay nifarana nampahonena, amin'ny maty ny Aotrisy Rudolf Crown Prince sy ny tia, Baroness Marie Vetsera. Raha ny tantara no lasa eritreritra anao, afaka manampy ny Grand ny lisitry ny hotely manan-tantara any Eoropa mba hitsidika. Head ny Vienna lamasinina avy any Munich, amin'ny fijanonana ao amin'ny Salzburg.
Innsbruck ho any Vienne Lamasinina
Frankfurt ho any Vienne Lamasinina
Manan-tantara nitsidika Hotels in Eoropa lamasinina Summary!
No tadiavinao mba hitsidika ny sasany amin'ireo hotely manan-tantara mahaliana indrindra ao Eoropa? Omano ny lalana amin'ny alalan'ny tanàna Eoropeana lehibe sy boky hoe Ny fiaran-dalamby tapakila mba anao any!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/historic-hotels-europe/ - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#trano fandraisam-bahiny #trano fandraisam-bahiny #Vienna europetravel Munich trainjourney fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel travelaustria travelfrance travelgermany travelparis travelrome